Te Reo Māori/mi/theprincipleofsputteringtargetmagnetronsputtering.html
 » သတင်း » စက်မှုသတင်း
sputtering ပစ်မှတ်၏ magnetron sputtering ၏နိယာမ
Magnetron sputtering မူအရ: sputtered ပစ်မှတ်အကြား orthogonal သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်လျှပ်စစ်စက်ကွင်းတစ်ခုထည့်ပါ (cathode) နှင့် anode, sputtering ပစ်မှတ်သည်လိုအပ်သော inert gas နှင့်ပြည့်သည် (များသောအားဖြင့် Ar gas ပါ) high vacuum chamber တွင်. အမြဲတမ်းသံလိုက်သည်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည် 250-350 ပစ်မှတ်ပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ Gauss သံလိုက်စက်ကွင်း, ဗို့အားမြင့်လျှပ်စစ်စက်ကွင်းနှင့်အတူ orthogonal လျှပ်စစ်သံလိုက်စက်ကွင်းကိုဖွဲ့စည်းသည်။.
လျှပ်စစ်နယ်ပယ်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အောက်မှာ, Ar ဓာတ်ငွေ့သည်အိုင်းယွန်းများနှင့်အီလက်ထရွန်များထဲသို့ဓာတ်ပြုသည်. အချို့သောအနုတ်လက္ခဏာမြင့်ဗို့အားပစ်မှတ်သို့သက်ရောက်သည်. ပစ်မှတ်မှထုတ်လွှတ်သောအီလက်ထရွန်များသည်သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ပြီးဓာတ်ငွေ့များ၏ ionization ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထိခိုက်သည်, cathode အနီးတွင်သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော plasma ကိုဖွဲ့စည်းသည်. Lorentz အင်အားစု၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ရှိသည်, Ar ions များသည်ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်သို့အရှိန်မြှင့ ်၍ ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်ကိုအရှိန်မြင့်တင်သည်, ထို့ကြောင့်အက်တမ်များသည်ပစ်မှတ်မှလွင့်ထွက်သွားသောအရှိန်အတိုင်းပြောင်းလဲသွားပြီးပိုမိုမြင့်မားသောအရွေ့စွမ်းအင်ဖြင့်ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်မှပျံထွက်သွားသည်။. ရုပ်ရှင်အတွက်အောက်ခံမြေသြဇာ. Magnetron sputtering ကိုယေဘူယျအားဖြင့်နှစ်မျိုးခွဲထားသည်: DC sputtering နှင့် radio frequency sputtering တို့ဖြစ်သည်. DC sputtering equipment ၏နိယာမသည်ရိုးရှင်းပါသည်. sputtering သတ္ထု, ၎င်း၏နှုန်းလည်းမြန်သည်။.
ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း sputtering ၏အသုံးချမှုအကွာအဝေးသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်. sputtering လျှပ်ကူးပစ္စည်းများအပြင်, လျှပ်ကူးပစ္စည်းမဟုတ်သောအရာများကိုလည်းလွှင့်ပစ်နိုင်သည်. တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ၎င်းသည်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့ဒြပ်ပေါင်းများကိုပြင်ဆင်ရန် reactive sputtering ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်, nitrides, နှင့် carbides .. sputtering ပစ်မှတ်၏ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းသည်တိုးသောအခါ, ၎င်းသည် microwave plasma sputtering ဖြစ်လာသည်. လက်ရှိအချိန်မှာ, electron cyclotron resonance ဖြစ်သည် (ECR) type microwave plasma sputtering ကိုအသုံးများပါတယ်။.
အကြို: လေဟာနယ် sputtering ပစ်မှတ်များ၏သတင်းအချက်အလက်မိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: Introduction to target types and application fields
» Magnetron sputtering ပစ်မှတ်များ
» မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း LCD ဖန်သားပြင်နယ်ပယ်တွင်သတ္တုမော်လီဘင်နမ်ပစ်မှတ်သည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ကပါဝင်သနည်း။
» သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယမ် sputtering ပစ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
» စာဝှက်ပါ, လေ ၀ င်လေထွက်အားဖြင့်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိုအသုံးချခြင်း
» cylindrical နှင့် planar magnetron sputtering ပစ်မှတ်များ၏အားသာချက်များ
လတ်တလောသတင်းများ & ဘလော့
Magnetron sputtering ပစ်မှတ်များ
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း LCD ဖန်သားပြင်နယ်ပယ်တွင်သတ္တုမော်လီဘင်နမ်ပစ်မှတ်သည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ကပါဝင်သနည်း။
သန့်ရှင်းမြင့်မားသောအလူမီနီယမ် sputtering ပစ်မှတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
စာဝှက်ပါ, လေ ၀ င်လေထွက်အားဖြင့်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းကိုအသုံးချခြင်း
cylindrical နှင့် planar magnetron sputtering ပစ်မှတ်များ၏အားသာချက်များ
Shaanxi Zhongbei တိုက်တေနီယမ် Tantalum Niobium သတ္တုပစ္စည်း Co., Ltd မှ. သတ္တုမဟုတ်သော သတ္တုများကို အထူးပြုလုပ်ဆောင်သည့် တရုတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော ရောင်းချမှု ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုံးစွဲသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။.
အီးမေး:[email protected] aliyun.com
Copy © 2017 | ကုမ္ပဏီအမည်. | ဆိုက်မြေပုံ